I-FAQ-iGeneham Pharmaceutical Co, Ltd.
Yintoni irosemary ekhutshwayo? Njani malunga neepropathi zokulwa ne-antioxidative?
Isicatshulwa sivela kwi-rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.), Isityalo esiqhelekileyo sasekhaya esikhule kwiiAlps ukusukela kwiminyaka ephakathi, kwaye ngoku sifumaneka kwihlabathi liphela. I-rosemary isetyenziselwe amawaka eminyaka njengesiqholo esimnandi, isilondolozi sokutya, kwizithambiso kunye neemveliso zeenwele, kunye nonyango lwamachiza kwizifo ezahlukeneyo. Kude kube ngoku, iindlela ezichanekileyo zeekhemikhali ezichaphazelekayo kwiziphumo zazo ezilungileyo zihlala zingaziwa.
I-Carnosic acid, i-Carnosol kunye ne-Rosmarinic acid zezona zinto zisebenza kakhulu kwi-rosemary ekhutshwe kwi-antioxidant, kwaye i-Carnosic acid ithathwa njengenye ye-antioxidant kuphela ekhupha i-radicals yasimahla ngendlela ye-multilevel Cascade.
"Ii-antioxidants zendalo azisebenzi kakuhle kunezinto zokwenziwa?"
Iingxelo ezininzi kuncwadi kunye nezifundo zethu zangaphakathi ziqinisekisa ukuba enyanisweni i-rosemary antioxidants zikwizicelo ezininzi ezisebenza ngakumbi kune-vitamin E (eyenziweyo), BHA, BHT, TBHQ nezinye. Ukongeza kuloo nto, ii-rosemary antioxidants zinobushushu obuphezulu kakhulu, kwaye ukusetyenziswa kwayo kwenza ukuba abathengi bagcine ilebheli ecocekileyo kwiimveliso zabo kwaye akukho ngxaki ye-allergen.
Kutheni uthatha irosemary?
Zininzi ii-antioxidants ezibalaseleyo ezinokukhusela umntu kumonakalo omkhulu wasimahla. Nangona kunjalo, isicatshulwa se-rosemary sine-antioxidants engaphezulu kweshumi, kunye nenkxaso yokukhusela kwizifo ezinganyangekiyo, kubandakanya i-Alzheimer's, esinye sezifo ezoyikeka kakhulu namhlanje.
• Inika ukhuseleko olunamandla
• Khusela iiseli zobuchopho kwiziphumo eziqhelekileyo zokwaluphala
• Isenokucothisa ukukhula kwesifo se-Alzheimer
• Khusela iiseli kwi-carcinogens
• Yeka ukukhula kweeseli zomhlaza
• Inceda ukuthomalalisa iimpawu zokungezwani komzimba, ingakumbi uthuli
• Ukuphucula amandla e-vitamin E
• Gcina inqanaba esempilweni loxinzelelo lwegazi
• Ubushushu obuphezulu be-Antioxidant eqhubekayo
Yintoni eyenza i-rosemary extract ikhetheke kangaka?
I-Antioxidants ibonakalisiwe ukuba ithomalalisa ii-radicals zasimahla, kodwa ayizizo zonke i-antioxidants ezilinganayo. Kwiimeko ezininzi, yakuba i-antioxidant iye yathomalalisa i-radical yasimahla ayisasebenzi njenge-antioxidant kuba iba sisixhobo se-inert. Okona kubi ngakumbi, iba yi-free radical uqobo.
Yilapho i-rosemary extract ihluke kakhulu. Inobomi obude be-antioxidant. Ayisiyiyo loo nto kuphela, equlethe uninzi lwee-antioxidants, kubandakanya i-Carnosic acid, yenye ye-antioxidants ethomalalisa ii-radicals zasimahla ngendlela ye-multilevel Cascade.
I-Mulberry Leaf ikhupha njani i-1-Deoxynojirimycin?
I-1-Deoxynojirimycin (DNJ) luhlobo lwe-alkaloid ekhoyo kumagqabi e-Mulberry kunye ne-bark yengcambu.I-DNJ yamkelwe ukuba ibe neziphumo zokugcina inqanaba leswekile yegazi, umsebenzi weAntiviral kunye noncedo lokuphucula imetabolism yolusu kunye nokucoca ulusu.
Uphando lubonisa ukuba xa i-DNJ ingena emzimbeni, ichaphazela ngokufanelekileyo imisebenzi yokuthintela ukubola kwesitatshi kunye neswekile nge-sucrase, maltase, α-Glucosidase, α-amylase enzyme, oko ke ukunciphisa kakhulu ukufunxwa kweswekile yomzimba, kunye nokugcina iswekile ibe ninzi izinzile ngaphandle kotshintsho ekutyeni. Ukongeza, i-DNJ inegalelo ekuphelisweni kwenkqubo yokuguqulwa kweswekile yegciwane le-HIV glycoprotein. Okwangoku, ukuqokelelwa kwee-glycoprotein ezingafakwanga kunokuthomalalisa ukudityaniswa kweseli kunye nokubopha phakathi kwentsholongwane kunye ne-host cell receptor, kunye nokwenziwa kokudibana komzimba weseli ukuze kungasebenzi ukuphindaphinda kwe-MoLV ukuze kuxhamle umsebenzi we-cytostatic
Yintoni umsebenzi we-Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin?
I-Mulberry Leaf ithathwa njengemifuno elungileyo kwiTshayina yakudala yokulwa nokudumba, ukuxhasa umlo wokulwa nokuguga kunye nokugcina impilo. Igqabi le-Mulberry lityebile kwii-amino acid, ivithamin C kunye nee-antioxidants. Phakathi kwezi zinto, ezona zixabisekileyo yiRutoside kunye ne-DNJ (1-Deoxynojimycin), Uphando lwakutsha nje lwaseTshayina lubonise iRutoside kunye ne-DNJ ziyasebenza ekulawuleni amanqatha egazi, ukulinganisa uxinzelelo lwegazi, ukunciphisa iswekile yegazi, kunye nokunyusa imetabolism.
Yintoni ifuthe leMulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin kwiiprofayili zeGazi leLipid ebantwini?
Amagqabi e-Mulberry atyebile kwi-1-deoxynojirimycin (DNJ), exabisekileyo ekugcineni inqanaba le-α-glucosidase esempilweni. Besikhe sabonisa ukuba i-DNJ-rich rich mulberry leaf extract icinezele ukunyuswa kwe-postprandial yeglucose ebantwini. Injongo yolu phononongo yayikukuvavanya iimpembelelo ze-DNJ-rich rich mulberry leaf profiles kwi-plasma lipid profiles ebantwini. Ilebhile evulekileyo, isifundo seqela elinye saqhutywa kwizifundo ezili-10 ngenqanaba lokuqala le-serum triglyceride (TG) ≥200 mg / dl. Izihloko ezifakwe kwiifomsile eziqukethe i-DNJ-rich rich mulberry leaf extract kwi-12 mg kathathu yonke imihla ngaphambi kokutya iiveki ezili-12. Iziphumo zethu zibonise inqanaba le-TG kwi-serum lehlisiwe ngokuthozamileyo kwaye iprofayili ye-lipoprotein ineenguqu eziluncedo ekulandeleni iiveki ze-12 zolawulo lwe-DNJ-rich rich mulberry leaf. Akukho lutshintsho lubalulekileyo kwiiparitha zehematological okanye zebhayoloji eziqwalaselweyo ngexesha lokufunda; akukho ziganeko zibi zinxulunyaniswa ne-DNJ-rich rich mulberry leaf extract
Yintoni iFenugreek Seed Extract?
Yaziwa ngcono eNtshona njengesiqholo sekhari, iFenugreek ixhasa inqanaba lempilo le testosterone, ibonelela ngezibonelelo eziqinisekisiweyo kwindawo yokuzivocavoca- nakwigumbi lokulala. Ikwakhuthaza ukuveliswa kobisi kubafazi abongayo kunye nokugcina isibindi sisempilweni. Imbewu yeFenugreek isetyenziswa ngokubanzi njengegalactagogue (iarhente evelisa ubisi) ngoomama abongayo ukuphucula ubonelelo lobisi lwebele. Uphando lubonakalise ukuba i-fenugreek yinto ekhuthaza imveliso yobisi lwebele kwaye isetyenzisiwe kangangeenkulungwane ukunceda ukugcina inqanaba leswekile eqhelekileyo kunye nokulinganisa iswekile esegazini. Uvavanyo lweklinikhi lwakutsha nje lubonakalisile ukuba iFenugreek ivuselela ukufihlwa kwe-insulin exhomekeke kwiswekile yipancreas. Izifundo ziqinisekisile iipropathi ze-hypoglycemic zeFenugreek greek seed, okt. Inokukunceda ukugcina amanqanaba eswekile yegazi eliqhelekileyo, kwaye inegalelo ekunciphiseni ubunzima kunye nasekulahlekeni kwamafutha ngokunjalo. Imisebenzi yefenugreek imbewu ikhutshwe apha ngezantsi:
• Lungisa imetabolism
• Ukuxhasa ukonyusa amandla oMntu, ukuqhuba kunye nokusebenza
• ukwanda kwezibonelelo zokusebenza
• Ukuphucula imveliso yobisi kubafazi abangabongikazi
• Yandisa umsebenzi wepancreatic
• Gcina inqanaba legazi elisempilweni
• Uncedo kwimpilo yesibindi
Yintoni i-Furostanol saponins?
I-Furostanol saponins ikhona kwizityalo ze-fenugreek saponin, kuyanceda ukugcina inqanaba le-testesterone evuselelayo ngokwenza umzimba uvelise i-luteinizing hormone kunye ne-dehydroepiandrosterone. Isetyenziselwe ukonyusa amandla endalo omntu, ukuqhuba, kunye nokusebenza, kunye nokwandisa ukukhula kwemisipha. Uphononongo lwangoku lubonisa ukuba izinto eziphambili, iFurostanol saponins, eyayisakuba yi-diosgenin saponin, idlala indima ebonakalayo kwisithako esisebenzayo.
Abadlali be-Aerobics bafumanisa ukuba emva kokuthatha i-fenugreek saponins, ukutya kwabo kuphuculwe. Oko kuthathwa njengeyona nto intle kwabo bantu bafuna ukufumana ubunzima, inokusetyenziswa njengeziXhobo zoKwakha izihlunu. uthathe i-fenugreek ekhutshwe kabini yonke imihla kwiiveki ezintandathu enamanqaku angama-25% ngaphezulu kwiimvavanyo zokulinganisa amanqanaba e-libido kunabo bathathe iPlacebo. Kwakhona, vavanya. wanyuselwa ngaphezulu kwama-20%.
I-4-hydroxyisoleucine yi-non-protein amino acid, ekhoyo kwizityalo ze-fenugreek, ngakumbi kwimbewu ye-fenugreek, nefuthe lokukhuthaza ukhuselo lwe-insulin. Ukongeza, i-4-hydroxy-isoleucine inokuphucula i-creatine engena kwiiseli zemisipha. Inokuphucula amandla emisipha kunye nobunzima bemisipha, kwaye yonyuse amandla kunye nobukhulu beeseli zemisipha.
"Zeziphi iinkonzo onokubonelela ngazo?"
Ukuseka intsebenziswano yexesha elide kunye nabathengi, ke oko kuya kukubonelela ngeyona nto iphambili ngaphambi kweNtengiso kunye nakwiNkonzo yasemva kokuThengisa.
Phambi kweNtengiso yeNkonzo
1. Inani elincinci leesampulu zasimahla;
2. Inkxaso yezobuchwephesha eyomeleleyo evela kumzi-mveliso wethu nakwiziko lophando;
3. Cebisa ngezisombululo ezifanelekileyo kwiprojekthi yakho.
4. Iseti epheleleyo yedatha yobuchwephesha, njenge-CoA, i-MoA, i-MSDS, ukuHamba kweNkqubo, iiNgxelo zovavanyo, njl.
Njani ngeNkonzo yokuThengisa emva?
1. Nika ulwazi ngokuthunyelwa kwakho ngexesha;
2. Uncedo ekucoceni amasiko;
3. Qinisekisa imveliso yorhwebo efunyenweyo;
4. Inkqubo egqibeleleyo yokulandelela imveliso kunye nenkonzo;
5. Ingxaki esemgangathweni yeempahla inoxanduva kuthi